အင်းဝရွှေမြို့တော်ဟောင်းဆီသို့(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » အင်းဝရွှေမြို့တော်ဟောင်းဆီသို့(၂)
Posted by Diamond Key on Oct 13, 2011 in Local Guides, Travel | 8 comments
အဲဒီကနေ မြို့ဟောင်းမြို့ရိုး အတွင်းပြန်ထွက်ပြီး ကျုံးနဲ့ အပြိုင် ရွာလမ်းကလေးအတိုင်းသွားလိုက်တော့ ဗားကရာသို့ ဆိုတဲ့ လမ်းခွဲကို ရောက်လာပါတယ်။ ဒီလမ်းအတိုင်းမောင်းလာတော့ ရတနာဆီမီး ဘုရားစုကို ရောက်ပါတယ်။ နိင်ငံခြား ခရီးသွားတွေကိုတော့ မြင်းလှည်းကိုယ်စီနဲ့ ဟိုနားဒီနား တွေ့ရပါတယ်။ အင်းဝမှာက ဘုရားဖူးနဲ့ လေ့လာသူတွေ အတွက် စီးစရာ မြင်းလှည်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ရတနာဆီမီး ဘုရားစု ကနေဆက်သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဘယ်ဖက်လမ်းခွဲက ဗားကရာကျောင်းတော်ကြီး ဆီသွားတဲ့ လမ်းကလေးပါ။ လမ်းရဲ့ ဘယ်ညာမှာ စပါးစိုက်ခင်းတွေနဲ့၊ မြန်မာ့ ကျေးလက် အငွေ့အသက်၊ စိမ်းစိုနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကျယ်ကို ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေးလေးက အညာနွေကြောင့် အပူဒဏ် ခံစားနေရမှုကို ပျောက်စေကာ ဗားကရာကျောင်းတော်ကြီးဆီ ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဗားကရာကျောင်းတော်ကြီး ရဲ့ ကျွန်းတိုင်လုံးကြီးတွေ
ဗားကရာကျောင်းတော်ကြီး ကတော့ မြန်မာ့သက္ကရာဇ် ၁၁၉၆ မှာ ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက် ဆောက်လုပ် လှုတမ်းခဲ့တာပါ။ သစ်သားကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်ပြီး ကျွန်းတိုင်ပေါင်း ၂၆၇ လုံး၊ အကြီးဆုံး ကျွန်းတိုင်က လုံးပတ် ၉ ပေ၊ အမြင့် ၆၀ တောင်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းကြီးက အလျား ၁၈၈ ပေ၊ အနံ ၁၀၃ ပေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကျောင်းတော်ကြီးမျိုးကိုတော့ တွေ့မြင်ရဖို့ အလွန်ရှားပါးသွားပါပြီ။ ဒီမှာတော့ မြန်မာ့ ပန်းပုလက်ရာမြောက်တာတွေ လေ့လာစရာပါ။
ဗားကရာ နားက သိမ်ဘုရား
ဗားကရာကနေထွက်လာတော့ နေ့လည် ၁၂ နရီတောင် ရှိနေပြီ။ ဒါနဲ့ အနီးဆုံး ဆင်ကျုံးရွာမှာ မနက်စာဝင် စားကြပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ အင်းဝရောက်ရင် မဖြစ်မနေ လေ့လာစရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆင်ကျုံးရွာအနီး ဧရာဝတီ ကမ်းနဖူးက သမိုင်းဝင် အင်းဝ ဆင်ကျုံးခံတပ်ကို သွားကြပါတယ်။ ရတနာပုံနေပြည်တော်ကြီးကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ဖို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း အတိုင်းတက်လာတဲ့ နယ်ချဲ့တွေကို မြန်မာမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ရဲရဲရင့်ရင့် ကြံကြံခံကာ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ စစ်သံတွေ၊ တိုက်ခိုက်သံတွေ ဆူညံခဲ့တဲ့နေ၇ာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ ဧရာဝတီရဲ့ သဘာဝနဲ့ သိပ်လှတဲ့ နေရာလေးပါ။
မြန်မာ့သက္ကရာဇ် ၁၂၃၆ ၊ မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက်မှာ ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်း၊ ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင် တို့ရဲ့ စီမံမှုနဲ့ အီတလီလူမျိုး ကွန်မိုတိုက ဦးဆောင်ကြီးကြပ်ပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဆင်ရိုင်းများကို ကျော့ရာကျုံးကို ပြုပြင်တည်ဆောက် ခဲ့တာကြောင့် ဆင်ကျုံးခံတပ်လို့ ခေါ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဆင်ရိုင်းများကို ကျော့ရာကျုံးကို ပြုပြင်တည်ဆောက် ခဲ့တာမို့
ဧရာဝတီအတိုင်း အထက်ကို ဆန်တက်လာပြီး မင်းလှ နဲ့ ဂွေးချောင်းခံတပ်တွေကို ကျော်လာရင် ရတနာပုံနေပြည်တော် မရောက်မှီ တွေ့ရမယ့် အင်းဝက ဆင်ကျုံးခံတပ်၊ စစ်ကိုင်းက အစေခံ ခံတပ်၊ အမရပူရက သပြေတန်းခံတပ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီ ခံတပ် ၃ခုမှာ ပထမဆုံးထိတွေ့ရမှာက ဒီခံတပ်ပါ။ ဒီခံတပ် ဆောက်လုပ်ထားပုံက စတုရမ်းပုံ အုတ်တံတိုင်း ၃ထပ်၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် ပေ ၃၀ ကျယ်တဲ့ ကျုံးပါရှိကာ အပြင်တံတုင်း တစ်ဖက်လျှင် ၃၅၅ ပေ၊ အလယ်တံတိုင်း တစ်ဖက်လျှင် ၂၉၃ ပေ ရှိပါတယ်။ ခံတပ်ထဲသို့ ဝင်ရန် အရှေ့ဖက်မှာ အလျား ၃၂ ပေ၊ အနံ ပေ ၂၀ ရှိတဲ့ တံတားကို ယက်မလျှိုကာ ဆောက်ထားပါတယ်။
ခံတပ်ရဲ့ အတွင်း မြောက်ဖက်မှာ အရှေ့အနောက်တန်းလျှက် အခန်းငယ် ၂ခန်းပါရှိပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း လှေကားထစ်လေးတွေ လုပ်ထားပါတယ်။
သူရဲပြေးပေါ်က ရှေးဟောင်း အမြောက်ကြီး
သူရဲပြေးပေါ်မှာတော့ ဆုံလည်အမြောက်တွေ၊ စိန်ပြောင်းတွေ၊ သေနတ်တွေထားဖို့ စက်ဝိုင်းပုံ အုတ်စီ အပေါက်လေးတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ တစ်ချိန်က ယမ်းခိုတွေနဲ့ ဝေနေခဲ့မယ့် ရှေးအမြောက်ကြီး ၂လက်က အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာပါ။ အတွင်းမှာ လက်နက်တိုက်၊ယမ်းတိုက် ပါရှိပါတယ်။ အထဲဝင်ကြည့်ဆိုပြီး အပေါက်လေးထဲ ခေါင်းငုံ ဝင်သွားကြည့်တာ သံတံခါးလေး သော့ခတ်ထားလို့ မရောက်ခဲ့ရပါဘူး။
မနက်စောစော မန္တလေးက ထွက်ခဲ့တာ ဆင်ကျုံးခံတပ်ကို လေ့လာပြီး ချိန်မှာတော့ မွန်းလွဲနေပါပြီ။ အဲဒီကနေပဲ မန္တလေးကို ပြန်လည် ဦးတည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ် အင်းဝ။
အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင် က ခုလို ကိုစိန်သော့ ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ သူ့ နန်းတော် ဂေဇက်ပေါ် ရောက်မှာ မသိခဲ့ရှာဘူးနော်.
ရွှေအင်းဝ သီချင်း သင့်ပြွန်(Youtube)မှာရှာလိုက်အုန်းမယ်၊အဲဒါလေးနားထောင်ပြီး ကိုစိန်သော့ ဓာတ်ပုံ နဲ့စာကိုခံစားမယ်ဗျာ။
ဘာမန့် ရမှန်းမသိလို့ 
အတွဲလေး တွေ များ
မေးတော့ ဖြေတော့မယ် မရေးပဲ ချန်ထားခဲ့တာတွေကို။
မယ်နုအုတ်ကျောင်းမှာက ကျောင်းအောက်မှာ အုတ်တိုင်တွေကြားမှာ လမ်းလေးတွေ ရှိတယ်။ မှောင်၊ အေးပြီး တိတ်ဆိတ်နေတော့ ဗျာ……………………..း)
နောက် မယ်နုအုတ်ကျောင်းမှာပဲ ဧရာဝတီနဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်တန်းကြီးကို ကြည့်ပြီး နားနားနေနေနဲ့ ……………….???
နန်မြင့်မျှော်စင်က လာနေတဲ့သူ၊ တက်လာရင် ကိုယ်က ကြိုတွေနေရတယ်…… ။
နေရာကောင်းလေးတွေများ သမို့……ကိုပေသာအားရင် သွားဗျို့။……..ဖို့။
ချိန်းတဲ့သူတွေကို သာ သွားချောင်းချင်လို့ ပါ
မယ်နုအုတ်ကျောင်းကြီးက တော်တော် ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နော်။ ဗားကရာကျောင်းတိုက် မြင်လိုက်တာနဲ့ မြန်မာမှာ ကျွန်းပေါမှန်း သိသာတယ်။ ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီနေရာတွေကို မရောက်ဘူးဖူး။ ဘုရားဖူးထွက်တုန်းက စစ်ကိုင်းတော့ ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ မင်းကွန်းမရောက်လိုက်ဘူး။ တကယ့် သမိုင်းဝင်နေရာတွေမို့ ရောက်တော့ ရောက်ချင်သား။ ဆရာတော် ဦးပိုက စာကိုတခေါက်ဖတ်ရုံနဲ့ မှတ်မိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဆရာတော် ဦးဗုတ်ကတော့ ဗုတ်အစ ဗုတ်အလယ် ဗုတ်အဆုံးထဲက တတိယဗုတ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ တကယ့်ကို အကျော်အမော် ဆရာတော်တွေပါ။ ဖတ်ဖူးတာက ကြာပြီဆိုတော့ သိပ်တော့လည်း မမှတ်မိချင်တော့ဘူး။ ကိုစိန်သော့ရေ သမိုင်းဝင်နေရာတွေ မြင်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
တကူးတက သွားရိုက်လာခဲ့ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ပုံတွေက ဒီလောက်ဆိုက်ဆို ကြည့်လို့ အားရပါတယ်။
ကိုစိန်သော့တို့များ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါတယ်.. အားကျလိုက်တာ..
ပုံတွေတင်တာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စာစီတာရောပဲ..